I-Onkyo HT-RC360 Ukubuyiselwa kweTesha yeTesha yaseKhaya
Itheyibhile yaseKhaya Izikhokelo & Izifundo
I-Onkyo HT-RC360 7.2 Isiteshi se-3D / I-Network Home Receiver Receiver
IReceiver yasekhaya yexabiso leNkqantosi eThengelayo eThengelayo Okunikezela ngakumbi kunokuba Ungalindela
Iipakethi ze-Onkyo HT-RC360 kwiimpawu ezininzi ze-receiver-home price receiver. Idlala imidlalo yokucwangcisa i-7.2 (iziteshi ezi-7 kunye ne-2 subwoofer outs) nge-TrueHD / DTS-HD i-Master Audio decoding kunye ne- Dolby Pro Logic IIz kunye no- Audyssey DSX . Kwividiyo, i-HT-RC360 ineziphumo ze-HDMI ezihambelanayo ne-3D kunye ne-analog kwi-HDMI yokuguqulwa kwevidiyo kunye no-4K upscaling (xa unayo ibonakaliso le-4K) nge-chip ye-Marvell QDEO. Iibhonasi ezingakumbi ziquka iPod / iPhone ukuxhumeka, i-intanethi kunye ne-DLNA. Emva kokufunda olu hlaziyo, jonga kwakhona ii-Iifayile zongezelelweyo kunye neZiphumo zoVavanyo lweNtsebenzo .
Nceda uqaphele ukuba le mveliso inqatshiwe ngumenzi, kodwa ingafumaneka njengoko isetyenziswayo.
Izixhobo ze-Onkyo HT-RC360 ziquka:
I-7.2 yesiteshi semidlalo yaseshashalazini yasekhaya (iziteshi ezi-7 kunye ne-2 subwoofer ngaphandle) ukuhambisa ama-Watts angama-100 ukuya kwii-7.
Ukukhutshwa komsindo: I-Dolby Digital Plus kunye ne-TrueHD, i-DTS-HD I-Master Audio, i- Dolby Digital 5.1 / EX / Pro logic IIx, i-DTS 5.1 / ES, 96/24, i-Neo: 6 .
Uqwalaselo olongezelelweyo lomculo : I- Dolby Pro Logic IIz, i-Audyssey DSX , i-Dynamic EQ, i-Dynamic Volume, i-Music Optimizer.
Izixhobo zomsindo (i-Analog): 5 I-Stereo Analog .
Izixhobo zomsindo (idijithali - ngaphandle kwe-HDMI): 2 i- Digital Digital , 2 Digital Coaxial .
Iziphumo zomsindo (ngaphandle kwe-HDMI): 1 Hlela - I-Analog Stereo, Isetyenzisi esisodwa - I-Zone 2 ye-Analog Stereo yangaphambi kokuphuma kunye ne-2 Subwoofer yangaphambili.
Izinketho zoxhumo zeSomlomo zokuPhambi kwePhambi / UkuPhindela kwi-Back / Bi-amp kunye ne-Powered Zone 2 enikezelweyo. Isethi enye ye-Zone 2 ivelisa iziphumo zomsindo (idinga am amp amp / izithethi ezongezelelweyo zokusebenza).
Iziphumo zevidiyo: 6 i- HDMI ver 1.4a (i-3D idlula / i- Audio Return Channel isakwazi), 2 i- Component , 5 Composite . Omnye umboniso wevidiyo uhlanganiswe kwipaneli yangaphambili.
Iziphumo zevidiyo: 1 HDMI, 1 iVidiyo yeVidiyo, 2 Ividiyo edibeneyo.
Ukuguqulwa kwevidiyo ye-Analog ukuya kwi-HDMI (480i ukuya ku-480p) kunye no-720p, i-1080i, i-1080p, okanye i-4K ngokusebenzisa upscaling usebenzisa iMarvell QDEO. I-HDMI idlulela kwii-1080p zemveli kunye ne-3D.
I-Audyssey 2EQ inkqubo yokusetha isithethi ngokuzenzekelayo. Ngokudibanisa imakrofoni enikezelweyo, i-Audyssey 2EQ isebenzisa uluhlu lweetoni zokuhlola ukugqiba amanqanaba ezithethi ezifanelekileyo, ngokusekelwe kwindlela efunda ngayo ukubeka isithethi ngokumalunga nezakhiwo ze-acoustical ekamelweni lakho.
40 I-AM Pre-FM / i-HD i-Ready-Ready (imodyuli yokufundwayo imfuneko) I-Tuner.
Ukunxibelelana kweNethwekhi / Intanethi nge-Ethernet okanye kwi-Adapter ye-Intanethi ye-Intanethi ye-USB.
Ukufikelela kwi-intanethi ye-intanethi kubandakanya iPandora, Rhapsody, iSrius Internet Radio, vTuner.
I-DLNA eqinisekisiweyo yokufikelela kwiifayile zedijithali ezigcinwe kwi-PCs, kwi-Media Servers, nakwamanye amadivaysi axhunyiwe axhumene nenethiwekhi.
Windows 7 ihambelana.
Ukuxhumeka kwe-USB yokufikelela kwiifayile zomsindo ezigcinwe kwi-flash drives okanye ukusetyenziswa kwe-Adapter ye-Intanethi ye-Intanethi ekhankanywe ngaphambili.
Ukuxhumeka kwe-iPod / iPhone / ukulawula nge-port yase-USB okanye kwisikhululo se-docking. Isango lokugcina elisezantsi elibonelelwe.
I-Onkyo Remote App ye-iPhone / iPod touch etholakalayo.
Omnye uRI uxhumano lokulawula esinye isixhobo esisebenzeneyo esisebenzeneyo.
Injongo engundoqo yimuphi umkeli womdlalo wekhenikhi ukukwazi ukubonelela amandla kunye nokuqhutyelwa komsindo kwezithethi kunye nobukhulu bendawo. Iklasi yexabiso layo, i-Onkyo HT-RC360 yenza kakuhle. I-HT-RC360 ivelise ngokucacileyo isandi esilungileyo kunye nesicatshulwa ngokusingqongileyo kwimimandla yesibini kunye neyedijithali kwiisetups zombini ezi-5.1 nakwi-7.1. I-HT-RC360 nayo inika ukuzinza okulungileyo ngexesha lomsindo ovakalayo kwaye lanikezela umbane osisigxina (esifanelekileyo kwigumbi elincinci okanye eliphakathi) ixesha elide ngaphandle kokufuna ukunyamezela ukuphulaphula.
Ndakhangela kwakhona ukuphakama kwangaphambili (i-prologic IIz / Audyssey DSX), endiyenzile nabanye abamkeliyo banikela ezi zikhetho. Kuze kube ngoku, ndivakalelwa kukuba ezi zikhetho zihambisa iziphumo ezixubekileyo. Zombini iindlela zokucwangcisa zinikeza insimu ephilileyo egcweleyo phambi nangaphezulu kwendawo yokuphulaphula, ukugcwalisa izikhala kwi-field yesandi phakathi kunye nangaphezulu kwekhohlo langasese, iziko kunye nezithethi ezilungileyo zihamba eziya kwindawo yokuphulaphula, kodwa umphumo awukho nje bekuya kubangela ukuba kuhlawulwe iindleko ezongeziweyo zokuthenga izithethi ezongezelelweyo ukuba zisebenzise umphumo, ingakumbi ukuba unesilinganiselo esihle 5.1 okanye isistim sokuseta isiteshi se-7.1 sele sisekhona.
Nangona kunjalo, ukuba nekhefu lokuphakama kwendlela yokuphakamisa phambili kunika abathengi bongezelela ukulungelelaniswa kwisilungiselelo sesithethi. Ngokuxhomekeka kwigumbi, zonke izakhiwo zesithethi kunye nokusebenzisa izinto ezisemgangathweni ezithengisa ukuphakanyiswa kwesiteshi, i-Pro Logic IIz / i-Audyssey DSX ingaba yindlela enokuyenza. Gcinani engqondweni akukho zixhobo ze-Blu-ray okanye zeDVD ezixutywe ngokukhethekileyo kwiziteshi zokuphakama kwangaphambili.
Into ebalulekileyo ukugcina engqondweni kukuba ngokuba i-HT-RC360 yi-receiver ye-7, ukuba ufuna ukusebenzisa i-Dolby Prologic IIz okanye i-Audyssey DSX yokucwangcisa, kuya kufuneka ulahle ukuseta okubandakanya iziteshi ezijikelezayo.
I-Onkyo HT-RC360 ikwabonelela nge-Zone 2. Ukuhamba kwimodi yesiteshi ye-5.1 kwigumbi eliphambili kunye nokusebenzisa iziteshi zombini ezizimeleyo (ngokuqhelekileyo ezinikelwe kwiisithethi ezisejikelezayo) Ndakwazi ukufikelela kwiDVD kunye ne-Blu-ray umsindo kwi-5.1 ephezulu yokuseta iziteshi kunye nokufikelela kwiCD (usebenzisa i-analog audio connection ) kunye noomathotholo odlala kwiindlela ezimbini zokumisa iziteshi kwelinye igumbi. Kwakhona, ndikwazi ukuqhuba umthombo omnye womculo kumagumbi omabini ngamanye amaxesha, omnye usebenzisa ukucwangciswa kwesiteshi se-5.1 kunye nesibini usebenzisa iziteshi ezi-2. I-Onkyo HT-RC360 inokwenza umsebenzi wecandelo lesibini kunye nabakhulisi bayo okanye isebenzise i-amplifier yangaphandle ngokuphuma kwe-Zone 2. Kubalulekile ukuqaphela ukuba imithombo yomsindo we-analog kuphela iyatholakala kwi-Zone yesi-2.
I-HT-RC360 inobuninzi be-HDMI kunye nevidiyo ye-analog, kodwa iyaqhubeka nokukhishwa kwe- S-video , iziphumo, kunye neziphumo ezixutywe kumxube, kunye nokunciphisa inani leqhosha levidiyo kwiisethi ezimbini.
Kwakhona, ngelixa i-HT-RC360 inekhono lokukhupha imithombo yevidiyo engenayo ukuya kwi-4K, loo mpawu ayizange ihlolwe njengoko ndingenako ukufikelela kwividiyo ye-4K enamandla.
Oko kuthethwa, i-HT-RC360 inika ngokufanelekileyo ukusebenza kwevidiyo ngokubanzi kwizigqibo ukuya kwi-1080p. Ngomnye, imifanekiso kwi-HDTVs isetyenzisiweyo ayibonakali nomehluko obonakalayo, ingaba i-HDMI isignali yavela ngokukodwa kumdlali we source 1080p okanye yahanjiswa kwi-HT-RC360 ngaphambi kokuba ifike kwi-monitor.
Oko kuthetha ukuthini ukuba kungakhathaliseki ukuba i-video upscaling yemithombo yeenkcazo eziqhelekileyo, i-HT-RC360 ihlinzeka ngokugqithisa kakhulu kwaye iguqule impawu zomsunguli we-HDMI kwaye andinayo i-HDMI imiba yesandla.
Ndifumanise ukuba nangona i-scaler yangaphakathi ye-HT-RC360 yenza umsebenzi omhle, ngokukodwa kwi-home receiver receiver kule xabiso lemali.
I-HT-RC360 idlulisele ubuninzi beemvavanyo kwi-Silicon Optix HQV Benchmark DVD, enika inkcazo yokusebenza kwevidiyo ngokubhekiselele ekuqhutyweni kwevidiyo kunye nokuphakanyiswa. Ukujonga okupheleleyo ngakumbi kwi-video ye-HT-RC360 ye-video, jonga kwimiphumo yokuhlola yam ukusebenza kwevidiyo .
Isici esongeziweyo, ngoku ngokusemgangathweni phantse kuwo onke ama-receivers yasekhaya, ukukwazi ukudlula izibonakaliso ze-3D. Ayikho imisebenzi yokucoca i-video echaphazelekayo, i-HT-RC360 (kunye nabanye abamkeli bemidlalo yaseshashalazini yasekhaya) bajoliswe ekusebenzeni nje ngeendlela zokubonakalisa iimpawu zevidiyo ze-3D ezivela kwisixhobo somthombo endleleni eya kwi-3D TV.
Njengoko lithemba, umsebenzi we-3D Pass-Through we-HT-RC360 akazange abonakale ukuba avelise nayiphi na into eneempahla ezongezelelweyo ezinxulumene nokusebenza kwe-3D, njenge-crosstalk (ghosting) okanye i-jitter eyayingekho ekhompyutheni, okanye kwividiyo Inkqubo yokubonisana / yeglasi. Ndivavanye oku ngokugqithiseleyo ukudlula isignali ye-3D ukusuka kumthombo we-3D Blu-ray ngqo kwi-3D TV ngaphandle kokuhamba nge-HT-RC360, ngelixa kulungiselelwe okwesibini ndadlulisela uphawu lwe-3D kumdlali we-Blu-ray Disc ngokusebenzisa i-HT- RC360 ngaphambi kokuya kwi-3D TV.
Internet Radio kunye neDLNA
Ndabona ukuba i-intanethi ye-intanethi inikezela kakhulu. Ezinye ze-intanethi yonikezelo lomsakazo ziquka vTuner, Pandora, naseNapster). Sirius Internet Radio.
Enye ibhonasi yomntu kule nkqubo yentengo yi-Windows 7 kunye ne- DLNA ehambelanayo, evumela ukufikelela kwiifayile zedijithali ezigcinwe kwi-PCs, kwi-Media Servers, nakwamanye amadivaysi axhunyiwe kwiinkonzo. Ukusebenzisa imenyu ye-Onkyo kunye ne-onscreen, ndakufumana kulula ukufikelela kumculo kunye neefayile zefayile kwi-PC yecrosoft.
Ukongezelela, i-front port USB ibangasetyenziselwa ukufikelela kwiifayile zomsindo ezigcinwe kwi-flash flash drive okanye i-iPod, equka ulawulo lwe-iPod usebenzisa i-Onkyo kude. I-albhamu yobugcisa nayo iboniswe ukuba ifakiwe kwiifayile. I-downside kuphela kukuba kukho i-port eyodwa ye-USB kuphela, oku kuthetha ukuba ukuba usebenzisa i-adapter ye-intanethi ye-intanethi, awukwazi ukungena kwi-USB flash drive okanye kwi-iPod ngexesha elinye. Nangona kunjalo, unako ukufikelela kwi-iPod ukudibanisa usebenzisa isitishi sokungena kwi-accessory esinqunyiwe kwi-port yonxibelelwano ye-Universal ekhoyo kwiplanethi yangemuva ye-HT-RC360 - ngaphandle kokuba usebenzise i-tuner ye-HD yomsakazo. Mna
Iziphumo ezininzi ze-HDMI (6)!
I-Dolby Pro Logic IIz kunye ne-Audyssey DSX inezela ukufakwa kwesithethi ukuguquguquka.
I-analog efanelekileyo kwi-HDMI yokuguqulwa kwevidiyo kunye nokuphakamisa.
Umsebenzi we-3D-pass through function works.
Ukukhethwa komxholo we-intanethi ye-intanethi kunye nokuhambelana kwe-DLNA.
I-Easy-to-use kwimenyu yesikrini.
Inkqubo yokubhala ikota yokudibanisa i-wiring ne-cables connection.
I-Dolby Pro Logic IIz kunye ne-Audyssey DSX nomphumo ayisoloko isebenza kakuhle.
Akukho zixhobo zamanqaku ezi-5.1 / 7.1 zamashishini okanye iziphumo - Akukho zixhobo ze-S.
Ayikho igalelo le-phono / ingxubevange.
Ayikwazi ukusebenzisa i-USB ye-WiFi Adapter kunye noxhumano oluhambelana ne-USB iPod ngexesha elinye.
Ayikho inketho yokufakelwa kwe-audio optical kwi-panel panel.
I-Audyssey yokukhethwa kweekanelo zokukhethwa kweekaneli ezingafakiwe - ukukhethwa kwendlela yesiteshi kuphela.
I-Onkyo HT-RC360 ngumzekelo omhle wezinga elikhawulezayo apho "iimpawu eziphezulu" zihlanzele kwiindawo zokufumana iithempi zasekhaya ezifanelekileyo. Ukongeza kuzo zonke iimpawu zomsindo onokulindela ukuba ummkeli womncedisi wekhaya ufumane ezi ntsuku, apho i-HT-RC360 isebenza kakuhle, iimpawu ezongeziweyo ezifana neDolby Prologic IIz / Audyssey DSX, i-3D passthrough, i-Intanethi ye-Intanethi, imisebenzi ye-DLNA, i-HD I-Radio, kunye ne-USB yokuxhunywa kwee-flash drive kunye nezinye izixhobo ezihambelanayo (ezifana ne-iPod) nazo zifakiwe.
Ukongeza, i-HT-RC360 ine "iPort Universal Connection Port" kwiplanethi yangemuva eya kwamkela i-Onkyo HD-Radio Tuner okanye i-iPod Dock. Enye into yokuxhamla ebandakanywe yi-HDMI engenayo yangaphambili, efanelekileyo kwimidlalo yemidlalo, efana ne-Sony Playstation 3 okanye i-Camcorders ye-high definition. Ukufumana uguquko oluninzi, i-HT-RC360 inemiphumo emibili ye-subwoofer (ngokunjalo i-.2 inkcazo kwingcaciso yesiteshi 7.2), kwaye iyakwazi ukuqhuba inkqubo ye-2 ye-audio zone.
Ngakolunye uhlangothi, i-HT-RC360 ayinayo igalelo le-Phono elinikezelweyo, kwaye ayinayo nayiphi na i-S-Video iziphumo okanye iziphumo.
Ezinye izinto ezimbini ezikhethiweyo ezichongileyo kukuba ukungabikho kwezimpendulo zomsindo we-5.1 kunye nokungabikho kweziphumo ze-preamp zesiteshi se-5.1 / 7.1. Oko kuthetha ukuthini ukuba ukuba unomdlali we-SACD okanye umdlali weDVD-Audio ohambelana ne-DVD ongenayo i-HDMI, ngoko awukwazi ukufikelela kwi-SACD okanye umxholo we-DVD-Audio kwii-device usebenzisa i-analog audio .
Ukuqwalasela yonke into, ukuba uthengela i-home receiver receiver enexabiso elifanelekileyo, kwaye awuyidingi iimpembelelo zomsindo we-analog, i-pono input, okanye i-S-Vu leXwebhu, i-HT-RC360 inika iimpawu ezizalisekisa isizukulwana esitsha sezixhobo zendalo, njengama-Play-Players nee-Televisions ezine-Blu-ray ezine-3D, ii-iPod, i-intanethi kunye nezixhobo zakho ezixhunyiwe kunethiwekhi. I-HT-RC360 ikulungele i-4K isisombululo seTV okanye iiprojekti zevidiyo, ukuba oko kuyimfuneko kwixesha elizayo.
Ngoku ukuba ufunde le ngcaciso, qiniseka ukuba ukhangele ngakumbi malunga ne-Onkyo HT-RC360 kwiProfayili yam Ifayile kunye neZiphumo zoVavanyo lweNtsebenzo .
Ukufumana okungaphezulu malunga ne-Onkyo, khangela iWebhusayithi kunye neFacebook Page
Itheyibhile yaseKhaya, i-Sound surround, i-AV Receiver Connections
Indlela yokwabelana ngemisebenzi ye-TV ye-Apple
Indlela yokuhambisa i-TiVo Recordings kwi-PC yakho
I-Soundphone Surround Sound - The Basic
I-Toshiba Symbio BDX6400 I-Media Box Ibhokisi leDiskhi ye-Blu-ray
Kutheni abanye abadlali be-Blu-ray Disc babe ne-HDMI Input?
Indlela yokutshintsha iVidiyo ukusuka kwi-Digital Camcorder ukuya kwiDVD Recorder
Iimodare zeRekhodi zeDVD - Ukurekhoda ixesha leeDVD
I-8 Best Peters Track Ukuthenga ngo-2018
IPad Mail: Jonga i-Attachment PDF yekhasi le-1 kunye nezichasiselo
Indlela yokukhubaza inkqubo yokubuyisela kwi-Windows ukususa iiVIV
I-Latest TV ye-TV ye-Apple 5
Kutheni i-3D ingabasebenzi kwabanye abantu?
IDameric Music Definition
Yiyiphi i-iPhone engayayithenga?
Vista Network kunye Ukwabelana ngeziko
Ukufikelela kwi-Yahoo! yamahhala! Imeyili nge Mac OS X Mail
Indlela Yokutshisa Umculo kwi-CD kwi-iTunes: Ukulondoloza iingoma zakho kwiDiski
Indlela Yokusetha Idivayisi Yakho entsha ye-Android kwiMinyathelo emi-4
Yintoni iFayile yeDrand?
Iimpawu ezixakekileyo zeBanga kwi-Add to Snapchat
Indlela Yesebenzi Yesixhobo
Iikhomputha zeZifama kunye neziPhene ezingabonakaliyo
Yintoni ifayela le-XVO?
I-Denon AVR-X2100W Ukubuyiselwa kweMveliso yoMbukeli weKhaya
I-PhotoScape ye-Windows Free Photo Editor Review
'Ifowuni yeSebenzi 4: Iimfazwe zanamhlanje' Iichibi zePC
Yintoni i-Deckle Edge?
Ukunciphisa Umsindo weNdlela kunye ne-Ambiance